नेपाल आज | नायिका अश्लेषाले फिल्म पाइनन्, भन्छिन्, ‘नपाएको होइन नगरेको’
नायिका अश्लेषाले फिल्म पाइनन्, भन्छिन्, ‘नपाएको होइन नगरेको’
शनिबार, १२ साउन २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज(PO)
काठमाडौं । ‘प्रेमगीत २’ बाट आफ्नो फिल्मी यात्रा सुरु गरेकी अभिनेत्री अश्लेषा ठकुरीको फिल्म गत वर्ष प्रदर्शन भयो । अभिनेत्रीको करिअर अभिनेता प्रदिप खड्कासँग जोडी बाँधेपछि चम्कन्छ भन्ने भनाई उनको हकमा भने लागु हुन सकेन ।
ठकुरी फिल्म बक्सअफिसमा हिट भईन तर उनी प्रदीपको स्टारडमको छाँयामा परिन् । उनी छायाँमा पर्नुको मुख्य कारण भने उनको अभिनय नै थियो । यो फिल्म पश्चात ठकुरीको हातमा कुनै नयाँ फिल्म नभएको चर्चासँगै दर्शकहरुको मनमा ठुलो कौतुहुलताले बास गरेको छ । के अश्लिषाको फिल्म यात्रा सकिएको हो त ?
उनी ‘प्रेमगीत २’ रिलिजको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि बाहिरी ब्यानरसँग कतै जोडिन नसक्दा फेरि उनलाई आसुसेन फिल्मसका सन्तोष सुनले नयाँ फिल्म ‘मेरी मामु’ मा दोर्होयाए । पुन ःडेब्यु फिल्मको ब्यानरसँगै जोडिनुले पनि उनको हातमा नयाँ फिल्म नभएको कुरालाई मलजल मात्र गरेको कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । यसबाट उनको फिल्मी यात्रा त्यती सफल नभएको कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।
उनी शुक्रबार फिल्म ‘मेरी मामु’ को टाईटल गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित थिईन् । पत्रकारले उनलाई फिल्म नपाएको कि नगरेको ? भन्दै प्रश्न गर्दा उनले भनिन् , ‘ म चुप बस्नुको पछाडि फिल्मबाट अफरै नआएको भन्ने कुरा गलत हो ।’
उनले भनिन् , ‘मैले मेरो क्यारेक्टर निभाउन सक्ने फिल्म मात्र गर्छु । फिल्म अफर आयो भन्दैमा वर्षमा ६,७ वटा फिल्म गरेर त्यसको उपलब्धी केहि छैन । म पनि मेरो करिअरप्रति
‘प्यासिनेट’ छु । मैले कुरेँ । स्क्रिप्टहरु पनि आए । तर, मलाई सुहाउने कुनै पनि थिएनन् ।’ जब आसुसेन फिल्मसबाट ‘मेरी मामु’ को अफर आएपछि मैले नाईँ भन्नै सकिनँ किनकी, मलाई स्क्रिप्ट उत्कृष्ट लाग्यो । भोली पनि यो ब्यानरसँग आबद्ध हुनसक्छु यदी मलाई मन पर्यो भने । फेरि त्यो आसुसेनकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन’, उनले भनिन् ।
उनी भन्छिन्,‘मैले यसमा क्यारेक्टरलाई न्याय दिन सक्ने भएर मात्र यो फिल्म गरेकी हुँ, यसको मतलब यो होइन कि मैले अरु फिल्मको अफर नपाएर गर्दै छु ।’
भाद्र १५ गतेबाट रिलिज हुने यो फिल्ममा उनको जोडी अभिनेता सारुक ताम्राकार रहेका छन भने यसका निर्माता यम थापाले गरेका छन । उनी यो फिल्मले आफ्नो फिल्मी क्षेत्रको करिअरको खुड्केलोमा एउटा सफलताको ईट्टा थप्नेमा विश्वस्त छिन् ।